Freemasonry, misogyny iyo cunsurinimo: jeermiga mugdiga ah ee bulshada loo yaqaanay iftiinka
Posted By: Roger Manzekelewaa: Maarso 14, 2020 11: 25 1 Comment
Dhowr qarniyo, maqalka ku saabsan Freemasonry, qaar badan waxay u arkeen inay tahay dariiqa kaliya ee kici doona, in ka badan sidii hore, oo ka soo horjeedda hoggaanka Kaniisada iyo dhaqanxumada diinta. Isagoo ka dhawaajinaya inuu ku wacdiyo walaalnimada guud, hadana si kastaba ha noqotee waa run in Freemasonry uu ku dhacay "baseness" sida dhaleecaynta laxiriira misogyny iyo cunsuriyada.
Dhawr ismaandhaaf, sida soo kicinta dadka madow iyo dumarka ee dhowr addeecitaan ee hoyga masoniga, ayaa sababay khad badan iyo calyo si ay u socdaan. Masonry wali, tan, kuma aysan guuleysan inay gabi ahaanba ka eriso meelaha cawlan ee laxiriira ka saarista madow iyo dumarka. Waa sawirka mugdiga ah ee ay sabab u yihiin jeermiga ku jira bulshada loogu yeero Bulshada "Iftiimin"
Iyada oo ku saleysan arrimaha kor ku xusan, Walaal Oswald Wirth ma jabin ereyada markii uu soo dhowaaday muuqaal guud oo taariikhi ah oo Freemasonry: "Waa in la tuuraa 'doomaha', laakiin qaaciddada aasaasiga ah ee astaan ​​u leh waa inaysan qofna ka xanaajin, maadaama qof walba xor u yahay inuu tarjunto sida ay iyagu aaminsan yihiin.laakiin shir, oo haysta maalmo yar uun ka hor intaanu xukunka ka qaadin su'aalo aad u tiro badan, ma soo geli karo imtixaanka labadaba daryeelka ama xirfadda la jecel yahay.
The Grand Lodge ee England wuu adeeci karaa ciilkii hore ee arintan iyada oo looga soo horjeedo awood Masonic taas oo in yar ka hartay sharafteeda. Sida Masonry-ka Iswidishka, waa inay, intaas ka sii dheer, waa inay si xun u fiirisaa dacaayadda jamhuuriga ah ee Masons-ka Faransiiska.
Marka laga hadlayo hudheellada waaweyn ee waaweyn ee Maraykanka, waxa dhiirrigeliyay sida ugu badan ee ay u muujiyaan dareenkooda ku aaddan sida ay uga soo horjeedaan addeecidda ay doonayeen in ay ku soo rogaan walaalnimada nacaybka. Wadaadadu si dabiici ah kuma ayan adkaanaynin caqiidadii Freemasonry. "(Oswald Wirth, "Buugga Tababbarka". Buug-gacmeedka loogu talagalay bilowga cusub, Daabacaadda Rhéa, Rue Cujas, Paris(Fr), 1923.
Iyadoo laxiriiraya wixii horey loo sheegay, aragtida Frater Charles Sotheran sidoo kale waa in tixgalin la siiyaa. Xaqiiqdii, Sotheran wuxuu ahaa Xoghayihii Xiriirka ahaa ee Naadiga New York Liberal Club. Wuxuu lahaa aqoon u lahaanshaha qoraa iyo bare si wax looga qabto maadooyinka qadiimiga ah, fekerka iyo kuwa kale. Isaga oo ah madax-bannaani sare, waxa uu ka soo dhex baxay darajooyinka si uu saamayn muuqata ugu yeesho Amarka Kadosh Memphis. Wuxuu sidoo kale bilaabay bilowga walaalnimada Ingiriisiga ee Rosicrucians iyo Jaaliyadaha kale. Il kuwi in la ogaado inuu isagu ahaa tifaftiraha Masonic ee New York Advocate. Wuxuu bixiyay dadaalada, waqtigaas, si loogu doodo sababaha madow iyo dumarka si loogu daro guryaha loogu adeego kuwa ay adeegeen markii hore.
Taarikhdu markay tahay Janaayo 11, 1877, halkan waxaa laga helayaa warqad ka timid Charles Sotheran u qoray Theosopher Ruush The Hesona Petravena Blavatski (alias madam Blavatski), iyada oo laga jawaabayo mid ka mid ah waxyaabaha ay daneyneyso: « Masonry gaar ah weli wax badan ayey qabataa. Waa inaan u aqbalnaa haweeneyda inay tahay wadashaqeynta nin ee dagaalka nolosha, sida masiiriyiinta reer Hungari ay dhowaan sameeyeen, iyagoo bilaabaya xisaabinta Haideck. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah in la aqoonsado ficil ahaan walaaltinimada bini-aadamka adoo diiday in aan qofna u diidin midabkiisa, jinsiyadiisa, xaaladdiisa bulsho ama waxa ay rumeysan yihiin. ka “Ragga midabka leh” (madow) waa inaysan ahaanin, inay ahaadaan walaalo cadcad. Midabka Masons (madow) kuwaas oo si habsami leh oo joogto ah loo bilaabay, iyaga oo codsanaya in lagu dhigo dhammaan xarumaha loo yaqaan 'American Lodges', waana loo diiday in ay galaan. Markaa waa inaan ku guuleysanaa South America si aan uga qeyb galno waajibaadka ka saaran aadanaha.
Haddii Masonry, sida ay sheeganeyso, saynis horusocod leh, iyo iskuul diimeed saafi ah, had iyo jeer waa in safka hore la geliyaa. Haddii ay ka dhigto kaliya dadaal xoog badan, mashruuc wuxuu ku wargelinayaa aadanaha in la xalliyo dhibaatooyinka qoto dheer ee qowmiyadda, iyada oo aan waxbadan la qaban, in ay meesha uga baxeyso dadkii ku guuleystey, midkoodna, malaha , oo aniga iyo anigu aan aqaanno, la-taliye la shaqeeyey madaxdii Amarkii, inta lagu guda jiray guushii ugu weyneyd ee uu gaadhay, oo dhegahooda ku gelinayay warqado sidii jinni Socrates u sameeyey. ” (Source: HP Blavastki, Isis shaaca ka qaaday).
Walaalnimada Universal, oo ah gacaliye ku habboon Freemasonry, wuxuu ahaan doonaa mid aad u qotodheer illaa bulshooyinka jecel inay wali ku sii adkaysan doonaan caadooyinka misogyniska iyo cunsuriyadda. Sababtoo ah Jinsiyada Madoow iyo Haweeneyda ayaa noqon doonta arrimood hyper muhiim ah mustaqbalka aadanaha.
Ha rumeynin wax walba oo aad aragto, mararka qaar marka guusha ay ku soo socoto